Global Voices teny Malagasy » Nepal: Fandraisana Malina An’ireo Mpikomy Ho Ao anaty Governemanta · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Septambra 2018 5:21 GMT 1	 · Mpanoratra Ujjwal Acharya Nandika (fr) i Pascale Doresca, imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Ady & Fifandirana, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Ireo Maoïsta ao Nepal, izay namarana ny fkomiana mitam-piadiana naharitra 12 taona mba hiditra ho ao anatin'ny politika nahazatra, dia nanjohy ny governemanta tamin'ny 1 Aprily, tamin'ny alalan'ny fandraisana an'ireo minisitera dimy eo ambany fitondran'i Girija Prasad Koirala . Niteraka fahafatesan'olona 13.000 ny fikomiana ary io no zavatra iray izay tena halan'ireo vahoaka tia filaminana indrindra tao amin'io firenena io. Ankehitriny, rehefa hanjohy ny parlemanta sy ny governemanta mpisolo toerana ireo Maoïsta, maniry hoavy mandry fahalemana ny olona. Manoratra ny Dedicated to Daniel Pearl hoe:
Miaraka amin'ny fametrahana an'ireo Maoïsta ao anaty governemanta sy ny fifanarahana ankehitriny amin'ireo antoko politika, manantena aho fa hahita Nepal vaovao isika tsy ho ela. Hitsahatra ny herisetra, hihetsika amin'ny maha tomponandraikitra azy ireo antoko ary hiasa isika ho an'i Nepal mamiratra sy miroborobo.
Manavao vaovao isa-minitra tsy mitsahatra mikasika an'ireo mpikomy manao fianianana ao amin'ny parlemanta ny United We Blog!.  Ananan’ i Satyakura  ny lisitr'ireo minisitra rehetra sy ny programa iraisana izay novolavolain'ireo antoko politika fito voalohany sy ireo Maoïsta. Ny asa tena mavesa-danja indrindra ho an'ny governemanta mpisolo toerana dia ny fifidianana Antenimiera Mpanorina, izay rehefa avy eo hamaritra ny foavin'ilay fitondram-panjaka ao anatin'ny fivoriany voalohany. Ny 20 jona no daty voatondro ho an'ny fifidianana.
Raha toa ireo bilaogera Nepaley faly noho ireo fanantenana fahalemana ho avy, noraisin'izy ireo tamim-pahamalinana kosa ny fampidirana an'ireo Maoïsta ao anaty governemanta. Namintina ny fihetsehampon'ny rehetra ny United We Blog! :
Ny fitarihana ireo Maoïsta ho ao anaty governemanta dia nanainga ny onjam-panantenana tao anatin'ireo Nepaley izay niandry fatratra tamim-pahakiviana ny famitàna ny zotra mahomby hisian'ny fandriampahalemana.
Ary, milaza ny Nepali Perspectives  fa ny mahaliana ny nisafidianan'ireo Maoïsta ireo ministera satria mifandray mivantana amin'ny vahoaka izy ireny. Nantsoiny hoe tetikady izy io mba hahazoana ny fahatokisan'ny vahoaka azy ary mampametra-panontaniana momba ny fahatsoran'ireo Maoïsta:
Raha nanaiky demokrasia iraisan'ny antoko maro ho an'i Nepal ireo Maoïsta, dia tokony hilaza izy ireo hoe nataony izany, misy zavatra mahatonga ho be fanantenana. Saingy raha toa ny fandraisana anjara amin'izao fotoana izao ao amin'ny governemanta ka tetikady iray fotsiny, dia ilay haingana ny mitandrina fatratra. Ny hetsiky ny Maoïsta, na taorian'ny fanaovan-tsonia ny Fifanarahana Fandriampahalemana aza, dia tsy mitondra loatra mankamin'ny fahatokisana momba ireo fikasàn-dry zareo.
Marobe ireo olona no eo ampiandrasana fiovana revolisionera avy amin'ireo Maoïsta nefa ny The Radiant Star  mino fa tsy hitranga izany. Mangataka ny olona izy mba tsy hiandry loatra satria ireo Maoïsta hatramin'ny nitankosenany tamin'ny politika nahazatra dia niady fotsiny hahazo toerana sy fiara Pajeros. Manantena ny Hamroblog  fa tsy lainga ilay governemanta ary hiasa miaraka ho antsika izy ireo mba hahatongavantsika amin'ireo fifidianana. Ny Nepali Netbook  dia miantso azy io ho faharesena iray nomen'ireo Maoïsta raha toa ny Everest Eyes  mitatitra fa marobe ireo olona izay noroahin'ireo Maoïsta hiata tamin'ny tananàny no mbola tsy afaka miverina any amin'ny nisy azy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/10/125773/
 Girija Prasad Koirala: http://en.wikipedia.org/wiki/Girija_Prasad_Koirala
 Dedicated to Daniel Pearl : http://danielpearl.blog.com/1655077/
 United We Blog!. : http://www.blog.com.np/united-we-blog/2007/04/01/deadlock-ends-parties-agree/
 United We Blog!: http://www.blog.com.np/united-we-blog/2007/04/01/history-in-nepal-interim-government-with-maoists-takes-oath/
 Nepali Perspectives: http://nepaliperspectives.blogspot.com/2007/04/maoists-and-interim-government.html
 The Radiant Star: http://www.nepalivoices.com/ujjwal/nepal-blog/2007/04/03/maoists-in-government-shattered-thoughts/
 Nepali Netbook: http://nepalinetbook.blogspot.com/2007/03/dont-wriggle-out-of-responsibility.html
 Everest Eyes: http://everesteyes.blogspot.com/2007/03/maoist-threat-intimidation-make.html